Doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed oo maanta ka dhaceysa Baydhabo – STAR FM SOMALIA
Musharaxiin dhowr ah ayaa u taagan xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labada kuxigeen, waxaana tan iyo shalay magaalada ka socday olole musharaxiinta ugu diyaar garoobayeen doorashada.
Doorashada ayaa noqon doonta mid sanduuq ah, waxaana xilalka Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo labadiisa kuxigeen ay u sharaxan yihiin illaa shan musharax.
Musharaxiinta ugu cad cad ee xilka Guddoomiyaha Baarlamaanka Koofur Galbeed ayaa waxaa ka mid ah C/qaadir Shariif Sheekhuna Maye iyo Cali Xasan, sidoo kale waxaa xilka Guddoomiye kuxigeenka koowaad u sharaxan labo musharax, halka Guddoomiye kuxigeenkana u sharaxan yahay hal musharax kaliya.
Doorashada ayaa waxaa lagu wadaa inay ka qeyb galaan Wasiiro ka tirsan Xukuumadda Federaalka, xubno ka socda Urur Goboleedka IGAD iyo Xafiiska siyaasada ee Qaramada Midoobey UNSOM.
Baarlamaanka Koofur Galbeed oo dhowaan la soo dhameystiray ayaa ka kooban 145 mudane, waana Baarlamaanka ugu badan marka loo eego Baarlamaanada Maamul goboleedyada dalka ka jira.